Khetha ngobulumko xa ulandela ikhondo lomsebenzi naphakathi kwentengiso kunye noyilo lwegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukusuka kwishumi elinesithandathu ukuya kwelishumi elinesibhozo uxinzelelo lwe kufuneka ukhethe into ofuna ukuyenza ubomi bakho bonke kwaye ukuba ufunda le nto, ngokuqinisekileyo ungumntu oyilayo kwaye eyona nto ikhuselekileyo kukuba uzifumana udidekile Ngaba ndikhetha intengiso okanye ngaba ndiyigcina indawo yoyilo?
Ukuzama ukukunceda kancinci, ndiza kukuxelela into ngobomi bam, ndiyathemba ukuba ungafumana into eluncedo kwaye ungawuphendula lo mbuzo ngokukhawuleza nangokulula.
1 Khetha uyilo ukuba uthanda ukwenza izinto ezinobuchule
2 Khetha intengiso ukuba uyathanda ukuphanda kunye nokwenza izisombululo
Khetha uyilo ukuba uthanda ukwenza izinto ezinobuchule
Into yokuqala endimele ndiyithethe kukuba bendinesibindi kwaye Ndaya eyunivesithi ngenjongo yokufunda ezentengiso, kuba bendicinga ukuba ngokwenza lo msebenzi ndizokwazi ukusebenza ngokwahlukileyo imiba yonxibelelwano kwaye inyani kukuba ayisiyonto ibubuxoki. Umsebenzi unobudlelwane obuhle kakhulu kunye neendawo zikamabonwakude, ukufota, unomathotholo, uyilo, iividiyo nokunye okuninzi.
Wayevuya kakhulu kukhetho awayelwenzile kunye nengxelo awayeyifumana, kodwa kanye phakathi kwekhosi ndifumana isimemo sokwenza uqeqesho njengomyili kwaye ngalamzuzu ndaqonda ukuba le nto bandifundise yona nento endiyifumene ebaleni yahluke mpela.
Intengiso ikumbindi kwaye ifuna izisombululo kwizinto ezimngqongileyo, ukuze uqonde ngcono ndiza kukucacisela ngomzekelo, xa usenza intengiso kuya kufuneka uyenze yenza uphando ukuze wazi abaphulaphuli bakho kunye nabathengiKuya kufuneka ufumane iindlela zonxibelelwano oza kuzidinga ukuze uphuhlise iphulo lakho okanye iimveliso oza kuzifuna.
Inyaniso kukuba wena Ngaba ucinga ukuba uyakwazi ukuba ngumatshini wokuyila wezimvo kunye nezisombululo? kodwa inyani kukuba yahluke ngokupheleleyo.
Umbutho wonke wenziwa ngentengiso yenkampani ngohlobo lwevili ngenjongo ukufezekisa ifuthe elihle kumthengi. Inyani yile yokuba bendingafuni ukuba ngumntu ophetheyo kuphando kunye nombutho, ndifuna ukuba ibe nguye owenza uyilo kunye nalowo waguqukayo uluvo lube yinto ebonakalayo nesebenzisekayo. Ukuba uyilo, uza kuhlala ucinga ngalo lonke ixesha malunga nendlela yokwenza into ebonakala inomtsalane kwaye ingeneka lula, ngaphakathi ukuyila indawo yemithombo yeendaba enoluntu engqondweni kwaye ubaqinisekisa njani ukuba bathenge umbono okanye inkonzo enikezelwa ngezixhobo zemizwa.
Ke, ukuba ungomnye wabo bathanda uphando, yenza izisombululo kwaye uqinisekise abantu Ngendlela elungileyo yokuba bafumane imveliso, ngaphandle kwamathandabuzo kuya kufuneka uye kwintengiso, ikhondo lomsebenzi liya kukufundisa izixhobo ezifanelekileyo zokuthatha loo ndlela kwaye ukuze wamkelwe kakuhle kumasebe wentengiso kunye nentengiso ngendlela elula.
Khetha intengiso ukuba uyathanda ukuphanda kunye nokwenza izisombululo
Abaninzi bakhetha oko Guqula izimvo zibe zizisombululo zovakalelo, aba bantu bazalwa benobuchule kwaye kulula ukuyila, iyunivesithi iya kubanika ulwazi malunga iinkqubo zokuhlela, ubuchwephesha bengqondo, ukubeka ngentloko kunye nezinye izinto ezininzi, aba bantu baya kwenza kakuhle ngokuya kusebenza kwiiarhente zentengiso nakwizitudiyo zoyilo.
Inye into endiqiniseke ngayo kukuba ngasemva kwephulo ngalinye eliyimpumelelo, kukho intatheli ebalaseleyo kunye nomyili ezisebenza kunye ngemvisiswano kwaye zifumana iziphumo ezintle, oku kubalulekile kwiinkampani nakwinzuzo yomthengi wokugqibela.
Umntu ngamnye unomdla wakhe kwaye nangona le misebenzi ihlala ididekile kuba iyafana kwaye inxulumene, Inyaniso kukuba inezinto ezisisiseko ezahlukileyo ezahlula umntu ngamnye kwelinye icala, ukukwazi ukubabeka kwindawo yabo efanelekileyo, le yimisebenzi ekhathalele ukuthengiswa kwemveliso kunye nendlela ezifikelela ngayo kumthengi wokugqibela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyilo okanye intengiso?
I-TV kunye nentambo ngokubanzi zibonisa ukuba zizele ngabalinganiswa abasebenza kumzi mveliso wokuthengisa kunye nonxibelelwano. Ukusuka kwiiankile zeendaba ukuya kubuntu bukanomathotholo ukuya kubaphathi bezentengiso, ezi zibonakala ngathi ziindawo ezinomdla zokuzonwabisa.
Nalu uluhlu olufutshane:
-U-Ted Mosby ovela kwindlela endadibana ngayo noMama wakho wayengumakhi.
-UJack Dolfe weXesha eliKhulu eHollywood FL ngumenzi wefilimu.
-UPenny weThe Big Bang Theory ngumdlali weqonga onomdla.
-U-Mike's Molly kunye noMolly bayeka umsebenzi wabo wokufundisa ukuze babe ngumbhali.
-Amadoda kaDon Draper wayengumlawuli woyilo kwiarhente yentengiso.
Ukuba kukho umahluko phakathi kwala manqaku mabini, kodwa kukho into eqinisekileyo, bafuna ukuzixhasa phaya.